Maxay u sameysaa warbixin kooban oo is-dhexgal ah oo fudud, cad oo dareen leh? | Abuurista khadka tooska ah
Qaabkee ayaa Warbixinta Maxaad badanaa u dirtaa macaamiishaada? Weligaa maku fikirtay inaad habeyso ka hor intaadan bilaabin rarka ama sameynta a warbixin kooban? Haddii aad naftaada weydiisay mid ka mid ah su'aalahii hore, sii wad akhriska, maaddaama qoraalkan aan ka wada hadli doonno waxa kooban uu yahay iyo sababta loo doorto mid is-dhexgal ah.
1 Muxuu ku saabsan yahay warbixintu?
2 Maxay u sameysaa warbixin kooban?
Muxuu ku saabsan yahay warbixintu?
Warbixinta kooban waa mid fudud, maxaa yeelay waxay unoqonaysaa su'aalo taxane ah ama si kale loo dhigo, es Su'aalo-weydiin maxaad ku sameysaa macaamiishaada inaad fahamto mashruucaaga kahor intaadan bilaabin abuuritaankiisa.
Sidan oo kale, iyada oo ku saleysan warbixinta kooban, waxaad bilaabi kartaa abuurka mashruucaaga xiga. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad rabto Habee warbixintaada oo aad u dirto macaamiishaada qaab fiican oo fiican, laakiin wali ma lihid degel? Maxaad sameysaa
Xaaladdan oo kale, waxaa jira dhowr siyaabood oo loo maro sameyso warbixin kooban midkoodna wuxuu ka kooban yahay adeegsiga InDesign si loo abuuro is-dhexgal PDF ah oo macaamiishaadu ay suurtogal u tahay inay ku dhammaystiraan kuna soo diraan emayl.
Maxay u sameysaa warbixin kooban?
Sida laga soo xigtay khabiir takhasus leh, dhowr sano ka hor waxay ahaan jirtay mid aad u badan in la sameeyo kulamada kooban shaqsi ahaan, si kastaba ha noqotee, kuma qaadan waqti dheer kulamada noocan oo kale ah inay joojiyaan inay noqdaan lama huraan iyo xitaa suurtagal mararka qaarkood.
Hadda adduunyadu way sii socotaa oo waxay noqoneysaa mid aad u sii kordheysa, oo aan sidaa u sii xumeyn, si kastaba ha noqotee iyo adduunyada xirfadleyda ah, waxaa lagama maarmaan ah in lala qabsado xaqiiqadan.
Dareenkaas, beddelka hore loo helay wuxuu ka koobnaa su'aalaha ku soo dir email ahaan, in kasta oo wax aasaasi ah ay weli maqnaayeen, awoodda hagidda macaamiisha. Halkaa markay marayso ayay su’aashu ka dhalatay: ka waran haddii foom loo diro macaamiisha?
Markaad dhiseyso foom, qaab ahaan waa macquul hagitaan macaamiisha ah adiga oo ku siinaya ikhtiyaarrada oo keliya, laakiin sidoo kale tusaalooyinka qaarkood iyo xitaa dhowr sharraxaad gaar ah oo ku saabsan qayb gaar ah oo ka mid ah su'aalaha.
Adoo isu beddelaya a Is dhexgal PDF naqshadeynta foomka su'aalahaaga oo lagu sharraxay InDesign, waxaad siin doontaa macaamiishaada fursad aad uga jawaabto si ka fudud iyo dabcan, dareen leh, adigoon qaadan casharro intaadan dirin.
Marka taladeenu waxay tahay inaad sameysid warbixin kooban oo is-dhexgal ah oo fudud, cad oo caqli gal ah, maadaama marar badan oo shaqada lagu murginayo aysan wanaagsaneyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maxay u sameysaa warbixin kooban oo is-dhexgal ah oo fudud, cad oo dareen leh?
Ku shaqee bilaash? Sababaha sababta haa loo sameeyo